समाचार - कसरी विभिन्न देशहरूमा मेरी क्रिसमस खर्च गर्ने?
मेरी क्रिसमस मेरो साथी,
यो पहिले नै मध्य डिसेम्बर हो। के क्रिसमस धेरै टाढा छ?
क्रिसमस आउनु भन्दा पहिले हामी तपाईंलाई हतार गर्‍यौं र नयाँ वर्षमा तपाईंलाई खुशीको काम र एक सुखी परिवारको कामना गर्दछौं
हामीलाई तपाईको ध्यानाकर्षणका लागि धन्यबाद र आशा छ कि २०२१ मा हामीसँग अर्को एक्सचेन्ज हुनेछ।
विभिन्न देशहरूमा क्रिसमसको रिवाजको बारेमा थप कुरा गरौं।
एउटा सन्देश छोड्न र विभिन्न चलनहरूको बारेमा च्याट गर्न स्वागत छ।
१ बेलायतीमानिसहरू क्रिसमसको समयमा खाने कुरामा बढी ध्यान दिन्छन्। खानामा भुनी सुँगुर, टर्की, क्रिसमस पुडिंग, क्रिसमस कीमा मासु पकाएको मासु पाइ, आदि समावेश छन्। परिवारका प्रत्येक सदस्यसँग उपहारहरू हुन्छन् र सेवकाको हिस्सा हुन्छ। सबै उपहार क्रिसमस बिहान वितरित गरियो। केहि क्रिस्मस गायकहरू घर-घरमा गएर राम्रो समाचार गाउन ढोकामा हिँड्दछन्। उनीहरूलाई घरमा पाहुनाले स्फूर्ति प्रदान गर्न वा सानो उपहार दिन आमन्त्रित गर्नेछन्।
२ किनकि संयुक्त राज्य अमेरिका धेरै जातीय समूहहरू मिलेर बनेको देश हो, अमेरिकीहरू क्रिसमस मनाउने अवस्था पनि सबैभन्दा जटिल हो। बिभिन्न देशहरुबाट आप्रवासीहरु अझै पनी आफ्नो देश को चलनहरु पालना गर्छन्। जे होस्, क्रिसमसको अवधिमा मालाहरू र अमेरिकीहरूका ढोका बाहिरका अन्य अनौंठो सजावटहरू समान हुन्छन्।
मा औसत वयस्क फ्रान्स क्रिसमसको पूर्वसन्धमा मध्यरातमा सामेल हुन लगभग चर्च जान्छ। त्यस पछि, परिवार जेठो विवाहित भाइ वा बहिनीको घरमा खानाको लागि पुनर्मिलन गर्न गए। यो जुलुस घरका महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा छलफल गर्ने बारेमा थियो, तर यदि त्यहाँ परिवारका सदस्यहरु जो मेल खाएनन् भने, असहमति पछि हटाइनेछ। सबैलाई पहिले जस्तै मेलमिलाप हुनुपर्दछ, त्यसैले फ्रान्समा क्रिसमस एक उदार दिन हो।
Children. बच्चाहरू भित्र स्पेन क्रिसमस उपहार प्राप्त गर्न ढोका वा विन्डो बाहिर जुत्ता राख्दछ। धेरै शहरहरूमा सबैभन्दा सुन्दर बच्चाहरु को लागी उपहार छन्। गाईलाई पनि त्यस दिन राम्रो व्यवहार गरियो। भनिन्छ कि येशू जन्मनुहुँदा एउटा गाईले उसलाई न्यानो पार्नको लागि सास फेर्‍यो।
Every. हरेक इटालियन परिवारको जन्म कथाको एक मोडल दृश्य छ। क्रिसमस पूर्वानुमानमा, परिवार ठूलो खानाको लागि एकजुट भयो र मध्यरातमा क्रिसमस मासमा भाग लिए। त्यस पछि म आफन्त र साथीहरूलाई भेट्न गएँ। केवल बच्चाहरू र वृद्धहरूले उपहार प्राप्त गरे। क्रिसमसमा, इटालियनहरूको धेरै राम्रो चलन छ। बच्चाहरूले निबन्धहरू वा कविताहरू लेख्दछन् उनीहरूको आमाबुबाको गएको वर्ष उनीहरूको पालनपोषणको लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्न। उनीहरूका कामहरू क्रिसमसको खाना खानु अघि नैपकिनमा प्लेटहरू वा टेबलक्लोथमा लुकेका थिए, र तिनीहरूका आमा-बुबाले उनीहरूलाई नदेखाएको नाटक गरे। तिनीहरूले ठूलो खाना समाप्त गरेपछि, तिनीहरूले यसलाई फर्काए र सबैलाई यो पढीए।
The स्वीडेन्स धेरै अतिथि सत्कार गर्ने। क्रिसमस मा, यो अधिक स्पष्ट छ। एउटा परिवार सुन्दर छ। चाहे धनी होस् वा गरीब, साथीहरू स्वागत छन, र अपरिचितहरू पनि जान सक्छन्। सबै प्रकारको खाना टेबलमा राखिएको छ कोही पनि खान को लागी। ।
।। डेनमार्क सबैभन्दा पहिले क्रिसमसको शुरूआत भयो
स्ट्याम्प र एन्टी क्षय रोग स्ट्याम्प, जो क्षयरोग विरोधी कोष कोष जुटाउन जारी गरिएको थियो। डेनेस द्वारा पठाईएको क्रिसमस मेलमा त्यस्तो कुनै टिकट छैन। ईमेल प्राप्त गर्नेहरूले अधिक क्रिसमस टिकटहरू देख्दा उनीहरूलाई त्यस्तै लाग्नेछ।